Radio Sudoorawaz 95 Mhz बालवालिकामा जण्डिसको प्रकोप बढ्यो
आईतबार साउन २०, २०७५
डडेल्धुरा- बर्षायाम संगै जण्डिसका बिरामी बढेका छन । पानि र खानपिनका कारण देखिने जण्डिसका बिरामी हिजो आज ह्वात्तै बढेका हुन । डडेल्धुरा उप क्षेत्रिय अस्पतालमा आउने बिरामी मध्ये दैनिक तिन जनाको अनुपातमा जण्डिस देखिने गरेको छ । यो समयमा खास गरी बालवालिकामा जण्डिसको समस्या देखिने गरेको छ । बालवालिकामा जण्डिस देखा परे पछि उप क्षेत्रिय अस्पतालमा १५ जना भन्दा बढी भर्ना भएका छन । दैनिक तिन चार जना बालवालिकामा जण्डिस देखा पर्ने भएकोले तिन दिन सम्म चिकित्सकको निगरानीमा राखी उपचार गरिने भएकाले १५ भन्दा बढी बालवालिका अस्पतालेको ओपिडीमा भर्ना रहेको अस्पतालले जनायो ।
यो समयमा देखा पर्ने जण्डिस दुषित पानी र खानाका कारण बाट हुने अस्पतालका मेडिकल सुपेरीटेनडेण्ट एमडिजिपि डा. जितेन्द्र कँडेलले बताए । उनले भने, जण्डिस एउटा लक्षण मात्र हो । कलोजोको बिमारी हुदा देखिने एक प्रकारको लक्षण हो, कलेजो धैरै मात्रामा आफै पुनःजीवित हुन सक्ने अंग हो, एउटा निश्चित समयमा ईन्फेक्सन हुन्छ, जसका कारण जण्डिस लगायत कलेजोको अरु ईन्जाएम्सहरु पनि बढेर जान्छ, धेरै जसो एउटा निश्चित समय सम्म पिक लेबलमा पुग्छ र आफै घटेर सामान्य अवस्थामा आउछ ।
अहिले बालवालिकामा देखिएको ईन्फेक्टिभ हेपाटाईटिस हो । डा. कँडेलले भने, कुनै कुनै बालवालिकामा हेपाटाईटिस ए र ई पोजेटिभ देखिएको छ । अरुहरुमा देखिएको छैन । यसको मुल स्रोत भनेको खाना र पानि बाट सर्ने हो । बालवालिका भन्दा वयस्कले खानपिनमा ध्यान दिने भएकाले यो समयमा बालवालिकामा बढी देखिएको हो । उनले थपे, बिद्यालय जाने, खेल्ने बालवालिका लाई अभिभावकले जति सुकै हेरचाह गर्न खाजे पनि सकिदैन, बजारका खाने कुराहरु पनि खाईदिन्छन, जुन ताजा हुदैन्न, पानि पनि प्रयोग गर्दिन्छन बाहिर यो यस कारणले बालवालिकामा बढी देखा परेको हो ।
यस बेला कलेजोले धेरै प्रोटिन भएका खाद्य वस्तु पाचन गर्न नसक्ने भएकाले धेरै चिल्लो वा पिरो वस्तु उपभोग गर्नु हुदैन । चिनी पानी, जिवनजल लगायतका मेवामा पर्याप्त मात्रामा सुगर पाईने भएकाले यस्ता चिज वस्तु उपभोग गर्नु पर्ने उनले बताए । सामान्य अवस्थामा अहिले देखा पर्ने हेपाटाईटिस अथवा हेपाटाईटिस ई र ए देखिने भएकाले अस्पतालमा पुर्ण रुपमा निको हुने उनको भनाई ।